Raad Raac News Online – Waxaa maanta Garowe soo gaaray wafti ka socda Dowladda Federalka & wafti ka socday….
Somalia October 23, 2017 Comments Off on Waxaa maanta Garowe soo gaaray wafti ka socda Dowladda Federalka & wafti ka socday….
Waxaa maanta Garowe soo gaaray wafti ka socda Dowladda Federalka & waftiga ka socda Maamulada qeybta ka ah dowladda Federalka Soomaaliya.
Socdaalka wasiir ku xigeenka wasaarada Kaluumaysiga Dowlada federalka Somalia Iyo waftiga ka socda Maalulada qaybta ka ah dowlada Federalka Somalia waxaa uu salka ku hayey ka qayb galka shir laba bari socon doona oo maainimada biriya ka furmi doona Magaalada Garoowe ee Xarunta PL.
Shirkaas oo ay Goob joog ka noqon doonaan wasiirada Wasaaradaha kaluumaysiga Maamul goboledyada ,rugaha ganacsiga iyoWaftiga ka socda dowlada federalka ayaa looga hadli doonaa Sidii looga faa’iidaysan lahaa khayradka ku jira bada Somalia .
Waftiga uu hogaaminayo wasiir ku xigeenka wasarada kaluumaysiga dowlada feedralka Somalia waxaa Garoonka diyaaradaha Kanooko ku soo dhaweeeyey Masuuliyiin ka tirsan xukuumada Pl oo uu kamid ahaa wasiirka kaluumysiga khayraadka bada pl ….
Soo dhawayn kadib wasiirka wasaarada Kaluumaysiga iyo khyraadka bada pl Cabdirashiid Maxamed Xirsi aya sheegay waftigaan maanta soo gaaray garoowe inay ka qayb ka yihiin wafuud kala duwan oo maal mihii la soo dhaafay soo gaarayey magaalada garoowe .
Dhinaca kale wasiir ku xigeenka wasaarada Kaluumaysiga dowladda federaalka Soomaaliya soomaliya Cabdulaahi Cumar Abshir waxaa uu sheegay in shirka ka furmaya magaalada Garowe inay ka soo saari doonaan Qodobo wax ku ool ah oo ku salaysan sidii looga faa’iidysan lahaa khayraadka ku jira bada Somalia.
Shirkaan looga hadlaya arimaha aan ku soo xusnay kor ayaa lagu wadaa in uu ka furmo Garowe maalinta birito ah.